China, 12 Gumiguru 2017
Iva NeHupenyu Hune Mitemo
"Zvino nemhaka iyi muchishingaira kwazvo wedzerai kunaka pakutenda kwenyu ..." (2 Petro 1:5).
Mundima yatavhura nayo mune shoko rinoti, "kunaka". Shoko iri rinoreva tsika dzakanaka. Rinoreva kuva nehupenyu hune mitemo. Mwari havadi kuti uve nerutendo chete. Vanodavo kuti unge uine mitemo. Wakatopiwa rutendo nechakare. Izvi ndizvo zvatinoratidzwa muna VaRoma 12:3. Ndima iyi inotaura ichiti, "... nechiyero chokutenda, sezvaakagoverwa naMwari". Rutendo rwakakosha. Asi harugoni kushanda rwuri rwoga. Rune zvinofanira kuwedzerwa parwuri. Rune zvinodiwa kuti rushande zvakanaka. Ndiko kuti zvinhu zvaunoita zvigare zvichibudirira. Ndiko kuti kubwinya kwako kugare kuchiwedzera. Chimwe chezvinodiwa izvi hupenyu hune mitemo.
Mwari vanoda kuti hupenyu hwako huve nemitemo. Mitemo iyi inofanira kunge iri yeHumwari. Shingaira kuzvipa mitemo iyi. Ndiko kusaka ndima yatavhura nayo yati, "... muchishingaira kwazvo wedzerai kunaka pakutenda kwenyu". Saka izvi hazvisi zvinhu zvinongouya zvoga. Unotofanira kuzvishandira. Unofanira kurovedzera hupenyu hwako. Hupenyu hwako hunofanira kunge hwakarongwa zvakajeka. Unofanira kuzvijaidza kurarama nemitemo. Shoko raMwari ndiro rinofanira kukubatsira kurongedza hupenyu hwako.
Izvi ndizvo zvatinovona pana Jesu. Bhaibheri rinotiratidza izvi. Jesu vaiva netsika yekuenda Kuimba yaMwari. Izvi ndizvo zvatinoverenga muna Ruka 4:16. Panguva yavo, sinagoge ndiyo yaiva imba yaMwari. Kuenda Kuimba yaMwari itsika yakovo here? Mutemo waunorarama nawovo here? Kune nguva dzatinosangana kuchechi. Unoenda kuchechi panguva idzi here? Kana kuti unoenda kana wakasununguka chete? Vamwe vanhu vanoenda havo kuchechi. Asi vanoenda musi wavanenge vakasununguka. Vanosarudza voga musi wavanoda kuenda kuchechi. Havana mitemo. Kuenda kuchechi hausi mutemo kwavari.
Asi izvi hazvisi izvo zvakanga zvakaita Jesu. Kuenda kusinagoge waiva mutemo kwavari. Ndizvo zvaunofaniravo kuita iwe. Tine nguva dzatinosangana kuchechi. Unofanira kuenda kuchechi panguva idzi. Hapana chinhu chinofanira kukukonesa kuendako. Usava nezvimwe zvakakosha zvokuita panguva idzi. Ndizvo zvinofanira kuitwa izvozvo.
Unofaniravo kuva nenguva dzekunamata. Zvekare, unofanira kuva nenguva dzekudzidza Shoko raMwari. Usangonamata paunenge wadira. Usangodzidza Shoko raMwari paunenge wasanganavo naro. Zvinhu izvi zvinotofanira kurongwa. Zuva rako rinofanira kuva nenguva yekunamata. Rinofaniravo kuva nenguva yekudzidza Shoko raMwari. Nguva idzi dzinofanira kunge dzichiera kwauri. Hapana chinofanira kudzikanganisa. Zvipe mitemo yakadai. Ukasadero, hauna chaunoita chinobudirira. Hupenyu hwako hahugoni kufambira mberi.
Baba vandinoda. Ndinokutendai. Mandiratidza kukosha kwekuva nemitemo muhupenyu hwangu. Ndiko kuti rutendo rwangu rushande. Ndine Mweya werunako. Mweya uyu uri kushanda mandiri. Uri kuita kuti ndive nemitemo muhupenyu hwangu. Saka ndinoshingaira. Ndinobereka zvibereko. Ndinoita zvinobudirira muhupenyu hwangu. Muzita raJesu. Ameni.
Daniere 5:12-14; Mapisarema 119:105; VaEfeso 5:8-11
(Munogona kuverenga chidzidzo ichi pa: http://7.am )